Avy Ny Orana, Tonga Ny Fako, Tsy Tara Ny Aretina | GAZETY_ADALADALA
Avy Ny Orana, Tonga Ny Fako, Tsy Tara Ny Aretina
Efa nanao izao ho afany ihany ny tompon’andraikitra tamin’ny fanadiovana ireny lavaka fivarinan-drano maloto rehetra nanerana ny tanàna ireny nandritra ny vanim-potoana maina. Nosokafana daholo ny ‘dalle’, nalalahana ny tatatra, sy ny sisa.
Tonga àry ity ny orana, fotoana natao hitsaràna ny vokatra. Nandaitra ve ny ezaka natao, sa mbola misy ny tokony hasiana fandinihana manokana?
Niara-tonga tamin’ny orana (na natoraly io na nataon’olombelona, tsy any no olana)….tonga niaraka taminy ihany koa ny fitosahan’ireo fako samihafa nafenimpenina tany ambadimbadika rehetra tany.
Iza no homena tsiny?
Faritra telo no mba voatsidiko sy hitako maso: Firaisana fahatelo, Firaisana Faha-6. Fa tsindriako manokana ireto tanàna manaraka ireto.
Soavinandriana ambanin’ny HOMI: misy lakandrano fandehanan’ny rano maloto izay ety amin’ny ilany ambany ety, akaikin’ilay toerana malalaka kely misy fiandrasana fiara mpitatitra, alohan’ny hifandraisany amin’ny arabe aty Besarety manoloana ny Farmasia iny. Tena zendana aho mahita hoe fako mety hahafeno irony karazana fiara 404 misy labasy irony no mitohana eo amin’ilay sakana napetraka eo amin’io faritra io. Rehefa dinihanao anefa ny antontam-pako mivangongo eo, dia tsy hafa fa ireny avy nampiasaina tany an-tokantrano ireny no betsaka. Kamo ve ny olona handeha hanatitra ny fakony any amin’ny toerana natao ho amin’izany ka zara aza misy an’io lakandrano io hialana vonkina?
Faritra Ambatolampy sy iny Ambohimanarina (Fir6) iny. Misy toerana fanariana fako amin’ireo faritra ireo efa tena feno hipoka tokoa, ka na fiara vaventy 3 hatramin’ny 5 avy amin’ny fivondronana (#CUA) aza no hanao be midina eny, dia inoako marimarina tokoa fa tsy hisy ho diso fanantenana, satria samy hahazo ny anjarany, tsy hisy hiverina maina izany. Manampy trotraka an’izany moa ny tsy fisian’ny caniveau, na tatatra mba natao hanarian’ny olona, na hivoahan’ny rano maloto avy any an-tokantrano amin’ìny faritra Ambohimandroso Ambohimanarina, amin’io ambony manomboka eo amin’ny bassin fanasan-damba io ka somary miditra mankany anaty tanàna toy ny ho any Antsahamasina, na koa hiverina hiakatra ho aty amin’ny fiangonana Alfa sy Omega. Dia eny rehetra eny ny olona no mamafy ny rano malotony. Nahoana? Satria rehefa nanontaninaa ny olona dia ny tompon’andraikitry ny fokontany mihitsy no tsy mivaky loha. Naleon’ny fokontany nanao rarivato ny lalankely tsy misy tatatra ho an’ny vahoaka, toy izay nanao azy roa miaraka mba ho tombontsoan’ny fiaraha-monina. Asa manaraka hono izany….Asa tokoa re!!!
Iny Mahavoky ambadiky ny mpivarotra hazo mivoaka mankany Besarety iny
An’iza ny fahavoazana?
Rehefa tonga ny orana, ary miparitaka ny fako, an’iza tokoa ny fahavoazana?
Ny tokony ho tsapan’ny rehetra dia samy tompon’andraikitra amin’izany izaho sy ianao. Ny fako natsipiko, natsipinao, natsipitsika noho ny fahalainana sy tsy am-piheverana teny rehetra teny, na dia miezaka aza ny tompon’andraikitra voatondro manokana hijery ny amin’izany,…ireny fako nataontsika ireny no maha-tompon’andraikitra voalohany antsika.
Fa tompon’andraikitra tsy afa-miala amin’izany ihany koa ireo tompon’andraikitra isan-tokony avy. Satria izy ireny tokony hanao fanentanana mandrakariva, tsy ho aminà haino aman-jery iray na roa voafaritra fotsiny, fa tokony hisandrahaka be araka izay tratra, ary tokony handray fepetra henjana amin’izay minia mbola tsy manaja ny mpiara-belona. Ny olana mantsy dia efa ZATRA AMBANANA amin’ny ho fampiharana lalàna, izay mijanona ho imolotra fotsiny sy ambony latabatra ny vahoaka Malagasy, ka tsy miraika intsony. Lazaina fa hatao an’izao na izao izay manao an’itsy na iry, nefa aiza akory……?
Dia tonga ny aretina, ary samy hiala vola avokoa, na ny isan-tokantrano mba ho fitsaboana izay trà-pahavoazana, na ny fanjakana mba tsy hipariahan’izany any amin’ny faritra hafa. Ka tsy ny NISOROKA VE NO TSARA noho ny fanampenan-davaka lava izao e?
Ho anao izay mamaky ity kahatsoratra ity ary, entano ny manodidina anao, manomboka amin’ny tena, ny ankohonana sy izay rehetra mifandray aminao isan’andro, mba hanary ilay toe-tsaina mamohehatra manao hoe AN’I DADA SA AN’i NENY, dia tsy asiana fanajàna… Antsika mianakavy hoe, ka ‘ndeha ho hajaina, fa fanànana iombonana ny tontolo iainantsika, samy tompony daholo.
Ho an’ny manampahefana isan-tokony kosa (Fokontany, #CUA, sns….) , raiso ny andraikitra tandrify, ary mba jereo ifotony ny tena olana sy ny zavatra andrasan’ny vahoaka, fa tsy faly haneho zava-bita, nefa tsy mifanitsy amin’ny filàny akory.
Filed under: anao ny fitenenana, fahasalamana, fiaraha-monina, tapatapany, toetr'andro, tontolo iainana | Tagged: Ambatolampy, Ambohimanarina, Ambohimandroso, CUA, HOMI, Soavinandriana |
« The first Zombie Walk of Madagascar / 31·10·2011 Maty i Joe Smokin Frazier »
nanie ravo, on 16/05/2012 at 9:34 said:
les cua on fait de leur mieux mais nous nous respectons pas la proprete c’est a cause de nous meme ce qui est arriver a nous alors defender votre terre batter pour lui si non la fin du monde arrivera vous aimer votre monde cherie alors fait le.